စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 05/12/2020)
ခင်ဗျားကြိုက်တဲ့လူစားမျိုးလား လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ဘတ်စ်ကားခရီးစဉ်? သို့ဖြစ်လျှင်ဤ post ကိုသင်တို့အဘို့မဟုတ်ပါဘူး! ကျနော်တို့ဥရောပရဲ့အထင်ကရက်ဘ်ဆိုက်များအချို့ကိုကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုခေါင်မိုးပေါ်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်သို့မဟုတ်ဖီးအပေါ်ရှမ်ပိန်ရင်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်ထင်. Here are some Best rooftop restaurants and cafes in Europe so you can sight-see in style.
ဥရောပအကောင်းဆုံးခေါင်မိုးပေါ်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကဖေး: အတ္တလန္တိတ်စတား ဟော်တယ် – Rome, အီတလီ
ကနေအစာရှောင်ရထား လန်ဒန် to Rome take around 14 နာရီ, coveringadistance of approximately 1,434 ကီလိုမီတာ. ယင်းအပေါ်မကြာခဏန်ဆောင်မှုရှိပါတယ် ရထားလမ်းလမ်းကြောင်း လန်ဒန်နှင့်ရောမမြို့အကြား. Trains for this journey usually open for booking around 12 လများ ကြိုတင်ပြီး. သင်၏ရက်စွဲများအတွက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းကိုမဖွင့်သေးပါက London မှ Rome သို့ရထားဖြင့်ခရီးအတွက်အသက်သာဆုံးလက်မှတ်များကိုရရှိနိုင်သည့်နေ့တွင်အီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိရန်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ကြိုတင်မှာကြားထားနိုင်သည်။. အသုံး တစ်ဦးကရထား Save အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အလွယ်တကူအမိန့်ရန်!
အကောင်းဆုံးအမြင်များကိုလည်းတဦးအဘို့ ပဲရစ်, အဆိုပါ Galerie Lafayette ဌာနစတိုးဆိုင်၏ခေါင်မိုးပေါ်တက်ဦး. ခုနစျပါးကြမ်းပြင်အထိ, ဒီ 1500m ကျန်ကြွင်းပဲရစ်ကျော်တစ်ကယ့်ကိုအထင်ကြီး 360 °ရှုမြင်ကမ်းလှမ်း. အဆိုပါ Opera House အနီးကပ်အကွာအဝေး၌တည်ရှိ၏နှင့် Eiffel မျှော်စင်က၎င်း၏နောက်ခံဖြစ်ပါသည်. သို့သော်မသာအမြင်များနှင့် ပတ်သက်., but the terrace also holdsamodern and sleek rooftop bar called The Cube Bar.
ဥရောပအကောင်းဆုံးခေါင်မိုးပေါ်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကဖေး: Aria Hotel High Note Sky Bar – Budapest, ဟန်ဂေရီ
Aria Hotel High Note Sky bar in ဘူဒါပက် Buda နှင့်သီးနှံဖျက်ပိုးများအလွန်ကြီးစွာသော 360 ဒီဂရီအမြင်ကမ်းလှမ်း. ဒါဟာသီးနှံဖျက်ပိုး၏စိတ်နှလုံးမှာတည်ရှိသည်, ကွာစိန့်ကနေပဲကျောက်ခဲတပစ်. စတီဖင်ရဲ့ Basilica. ဤသည်အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေစတိုင် bar ကိုတစ်ဦးအလွန်အားမစိုက်ရ Vibe ရှိပါတယ်, ထိုသို့ကသင်၏နှင့်အတူဘူဒါပက်ခံစားရန်ပြီးပြည့်စုံလမ်းဖွင့် မိသားစု နှင့်မိတ်ဆွေများ.
အဆိုပါ မီးရထား journey from London to ဘူဒါပက် is safe, လွယ်ကူပြီးစျေးနှုန်းသက်သာ ပဲကြာ 24 နာရီ, Eurostar နေဖြင့်ပဲရစ်မြို့နှင့်မြန်နှုန်းမြင့် TGV မှပဲရစ်မြို့ကနေမြူးနစ်မှ, then overnight sleeper to ဘူဒါပက်. သို့မဟုတ်ပဲရစ်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်နှင့် မြူးနစ်, သို့မဟုတ်ဘရပ်ဆဲလ်ကနေတဆင့်, Cologne & ဗီယင်နာ.
1881 per SAGARDI is the restaurant of the Catalonia ၏သမိုင်းပြတိုက်, မွို့၌တစ်မူထူးခြားသောအာကာသဘာစီလိုနာ၏ဆိပ်ကမ်းအပေါ်စီးနှင့်မြေထဲပင်လယ်မှလုံးဝဆက်ကပ်အပ်နှံ အစားအစာ, ပင်လယ်ကနေပြည်. ဤ အတှေ့အကွုံ အိန္ဒိယ၏ Terrace ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးဖြစ်ပါတယ်, ဘာစီလိုနာ၏ဆိပ်ကမ်းအားအပေါ်စီးမှခေတ်ပြိုင်ကျန်ကြွင်းကော့တေးဘား.
မှသွားလာရန်လွယ်ကူဒါဟာင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ သို့ ရထားစပိန်. A morning Eurostar to Paris in 2h20 from £44 one-way or £58 return, lunch at the remarkable Train Bleu restaurant at the Gare de Lyon, then the afternoon double-deck TGV ဒျူပလက်စ to Figueres (for the ဆာဗေးဒေါ Dali ပြတိုက်), Girona & € 39 တစ်ခုချင်းစီကိုလမ်းမှဘာစီလိုနာ. *ပြောင်းလဲမှုဘာသာရပ်စျေးနှုန်းများ.
#BestCafes #BestEuropeRestaurant #BestRestaurants #cafeview #restaurantview #ခေါင်မိုးပေါ် europetravel longtrainjourneys Tranride ရထားခရီးသွား